EYONA magumbi okulala ama-2 eApartment yaseLwandle ngaphambili (iJonga esecaleni) - I-Airbnb
EYONA magumbi okulala ama-2 eApartment yaseLwandle ngaphambili (iJonga esecaleni)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEsperanza
Indawo esisiseko kwaye akukho mincili kwinqaba esekwe kakuhle, ngaphaya kwesitrato ukuya elunxwemeni nasepakini. Kukho i-Jones i-Grocer kumgangatho ophantsi kunye neklabhu yolwandle ngaphesheya kwesitalato (i-2 min walk) Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola i-Abu Dhabi. Zonke izinto ezikhangayo ezinkulu zinokufikelelwa ngaphakathi kwe-15 - 25 imizuzu, kubandakanya iGrand Mosque, iLouvre, iFerrari World, i-YAS Island, iFormula 1, iMarina Mall. Ukuhamba ngeshishini indawo yam ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ye-Etihad Towers, ADNOC kunye nabanye abaninzi.
Indlu yeyakho yonke, kwaye isekwe kwinqaba esekwe kakuhle. Sifowuna kuphela ukuba uyasifuna. Uya kuba sezandleni ezikhuselekileyo zeqela lam eliya kuhlangana nawe kwipropathi kwaye likubonise ngeenxa zonke ukuze uxhamle kuko konke elikunika kona.
Ingxowa yokulahla iyafumaneka phambi kokuba ungene.
Singenza i-check-ins ukusuka kwi-9pm - kunye nobusuku.
Ukuphuma nge 11am
Indlu yethu enomtsalane enamagumbi ama-2 ibekwe kumgangatho woku-1. Ndibuliswe yi-concierge xa ungena, ezinye izinto eziphathwayo ziquka ukufikelela simahla kwindawo yokuzivocavoca kunye nedama lokuqubha.
Ngesicwangciso esivulekileyo esivulekileyo sokutyela / igumbi lokuhlala eligcwele iWi-Fi kunye nomabonwakude. Ikhitshi ligcwele zonke izixhobo ozidingayo ukwenza isidlo. Kukho iwasha / isomisi efakiweyo nayo eza kuba luncedo kuwe, ndiqinisekile.
Indlu ilingana nabantu aba-5 ngokukhululekileyo, siya kukushiya ulwe malunga nokuba yeyiphi ibhedi;
Ibhedi enkulu ene-en-suite-ibhedi ye-Queen
Igumbi lokulala eli-2 - ibhedi ye-Queen
Igumbi lokuhlala-ibhedi enye yesofa
Kukho indawo yokupaka imoto yabucala yabucala engaphantsi komhlaba, ngelixa iikhefi (iCosta Coffee, uJones iGrocer kwisakhiwo kunye ne-Starbucks) ngaphakathi kwe-1 min ukuhamba. Iivenkile ezahlukeneyo zingaphandle ngokuthe ngqo kunye nevenkile enkulu ekufutshane engaphantsi komzuzu omnye wokuhamba kunye nezinye iivenkile eziluncedo. Esona sithuthi sikawonke-wonke esikufutshane sikumganyana nje omfutshane wemizuzu emi-2, ngelixa kukho indawo yokuthambisa kunye ne-spa kwindawo kwaye kukho ipaki engasemva kwesakhiwo elungele iintsapho.
Ukuhamba nje okufutshane uya kufumana iCorniche apho kukho ulwandle lukawonkewonke kunye neepaki, umkhondo wokubaleka kunye neendawo zempilo.
Kutheni siyithanda le ndlu?
Inqabileyo yayo, kunye nejimu kunye nephuli yongeza izibonelelo zokwenyani
Ulwandle lusondele kakhulu
Ixabiso elikhulu, sicinga
Kutheni iindwendwe zethu ziyithanda, kwaye oku kuvela kubo..........
'Kukufutshane kuyo yonke into'
'Banaye umntu oza kudibana nawe aze akuxelele yonke into malunga nefulethi, oko kwenziwe kwalula kakhulu'.
Nceda uqaphele ukuba ezinye izinto ezenziweyo kunye nefenitshala kwimifanekiso zinokwahluka ngemibala.
4.72 · Izimvo eziyi-39
Olunye ulwazi lokukunceda endleleni:
Umgama ukuya elunxwemeni: 1 min
Umgama ukuya kwiivenkile: 1 min
Umgama ukuya kwiibhari kunye neendawo zokutyela: 1 min
Isiqithi saseAl Reem: imizuzu eyi-10 ngemoto
ILouvre: imizuzu eli-15 ngemoto
Isiqithi saseSaadiyat: imizuzu engama-20 ngemoto
Yas Island : 20 min ngemoto
Isikhululo seenqwelomoya: imizuzu engama-30 ngemoto
Nathi:Khawutsho nje umnxeba
Umbuki zindwendwe ngu- Esperanza
I-concierge kwi-tower iyafumaneka kuwe 24/7, kwaye ungandifumana ku-whatsapp ixesha elininzi.